पढ्नुहोस्, नरिवलको एक टुक्राको फाइदा «
Published :7June, 2018 12:15 am
लण्डनबाट पीएचडी गरेकी भारत भोपालकी डा. गिताञ्जली शर्माले नरिवलको उपयोगिताबारे नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेकी छिन् । डाक्टर शर्माका अनुसार नरिवल भिटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट र प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । गर्मीमा यसले शरिरलाई शितलता प्रदान गर्छ । काँचो नरिवलमा पानीको मात्रा पनि हुन्छ त्यसकारण शरिरलाई हाइड्रेट गर्दछ ।
यसले कपाल र छालालाई स्वस्थ बनाउने डा. शर्माको भनाइ छ । हिन्दु धर्मअनुसार नरिवलको प्रयोग सामान्यतया पूजा पाठमा हुने गर्ने गरिन्छ । तर नरिवलको एक टुक्राले शरिरलाई धेरै फाईदा गर्ने डा. शर्माले बताएकी छिन् । यसले शरिरको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै स्मरण शक्ति बढाउँछ ।
नरिवलको तेल राम्रो सनस्क्रिन हो । घाममा निस्कनु अघि यसलाई छालामा लगाएर निस्कनुहोस् । डण्डिफोरबाट राहत पाउनका लागि घिरौंलाको रसमा नरिवलको पानी मिसाएर अनुहारमा लगाउनुहोस् ।कब्जियतको समस्या पनि नरिवलको सेवनले निको हुन्छ । नरिवलको एउटा ठूलो टुक्रा खाएर सुत्दा यस्तो समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
यसो गर्दा बिहान पेट सफा हुने उनले जानकारी दिइन् । यसमा फाइबर पाइने भएकाले पेट सफा गर्दछ । गर्मीमा नाकबाट रगत आउने समस्या भएकाले औषधीको रुपमा नरिवल प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई मिश्रीसँग खाँदा नाकबाट रगत आउने समस्या समाधान हुन्छ ।
पछिल्ला दिनमा मानिसको व्यस्त जीवनशैली र अस्वस्थ्य खानपानका कारण मानिसमा विभिन्न खालका रोगहरु लाग्ने गरेका
माछामा प्रशस्तै पाइने प्रोटिन र भिटामिन-डी ले हाम्रो मांशपेसीको वृद्धि र विकासमा मद्दत गर्दछ। तथापी,
तपाइँ हामीलाई थाहा नहुन सक्छ काँचो केरा पाकेको केराभन्दा पनि फाइदाजनक हुन्छ । युनिभर्सिटी अफ
पाठेघर, पिसाब थैली, आदिजस्ता महिला अंग सामान्य अवस्थादेखि आफ्नो ठाउँहुदै योनीमा झर्नुलाई आङ झर्नु या
श्रीमतीलाई परपुरुषसँग आपत्तिजनक अवस्थामा भेटेपछि हत्या !
६ मंसिर, विराटनगर – इनरुवा नगरपालिका– ३ सोमबारेका ४५ वर्षका कारी यादवको हत्यामा संलग्न भएको